‘समृद्ध समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्दै नेपाली जनतामा खुशी ल्याउँछौं’
२०७६ भदौ १४ शनिबार ११:४५:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ, १४ भदौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रमले नतिजा दिन थालेको बताउँछन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को समाजवादी नारामा जनताका विविध कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताउँदै उनले तराई, पहाड र हिमालका जनतामा खुशीको सञ्चार प्रवाह हुन थालेको उल्लेख गरे । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको र जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको स्पष्ट पारे । सरकारका कामकारवाही र समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)का प्रतिनिधि रमेश लम्साल, हरि लामिछाने र राजेन्द्र विष्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
हामीले कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छौँ । यो कोही कसैप्रतिको अविश्वास होइन । परिभाषित काममा केन्द्रित बन्नुपर्छ । त्यसैमा केन्द्रित बन्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले सोही आधारमा कामहरु अगाडि बढाएका छाँै । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा समाजवादको एउटा नारा हो । यो थाहा पाउनुपर्छ सबैले । चीनमा समाजवाद लागू भएको ७० वर्ष भयो । अहिले पनि चार पाँच करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि छन् । त्यहाँको व्यवस्था खराब होइन नि । निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । अमेरिका पूँजीवादको संसारको सबैभन्दा बलशाली तागत भएको मुलुक हो । त्यहाँ नभएको चिज नै केही छैन । अमेरिकामा ‘होमलेस’ कति छन् ? गरीब कति छन् ? समस्या त्यहाँ छैन ? छ । त्यसैले हामीले हाम्रा देशका जनतालाई सुखी राख्नका निम्ति राज्यको तर्फबाट सके जति विवेक पु¥याएर विवादरहित ढङ्गले पहलकदमी लिनुपर्छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानूनहरु बने कि बनेनन् ? यसले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि मद्दत पुग्छ । नागरिकलाई सम्मान र सुखको नाराभित्र समेट्छ । सुख र समृद्धि दिन्छ । पैसा मात्रै भएर मात्रै मान्छे खुशी हुँदैन । त्यसो भए खर्बपतिले पनि आत्महत्या गरेको सुन्नु पर्दैनथ्यो होला । सुखभित्र के कुरा आउँछन्भन्दा, सम्मान र सुरक्षा पनि सुखका कुरा हुन् । अब हामीले सन् २०२२ मा त अल्पविकसित देशबाट माथि उक्लने कुरा गरेका छौँ । त्यस बेलासम्म हामी आधारभूत खानेपानीको कुरा टुङ्गो लगाउँछाँै । अहिले नै हामी सुरुङमार्गतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ । सम्पर्क सञ्जालको विस्तारले सहज बनाउँछ । यो असाध्यै महत्वपूर्ण चिज हो । संसार नै आज ‘कनेक्टिभिटी’मा चलेको छ । रोड, समुद्र, यातायातका सञ्जाल पनि त्यहीभित्र पर्छ ।
समाजलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ । स्वतन्त्रताको कुनै सीमा हुँदैन तर मर्यादाको सीमा हुन्छ । मान्छे स्वतन्त्रताका निम्ति लड्दै आएको छ तर मर्यादा हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै पनि समाजको मर्यादा हुन्छ कि हुँदैन ? भारतमा रक्सी किन्नुप¥यो भने बाबुको नाम, रक्सी पिउने मान्छेको नाम राख्छ कि राख्दैन ? त्यो अनुशासन होइन ? अमेरिकामा १८ वर्ष नपुगी रक्सी किन्न पाइँदैन । त्यो केही भएन । त्यो तानाशाही भएन, निरङ्कुशता भएन । यहाँचाहिँ १२ बजेपछि रक्सी खान पाइँदैन भन्यो भने ‘कम्युनिष्ट सरकार’, ‘दुइतिहाइको सरकार निरङ्कुश’ भयो भनिन्छ । मान्छे बाटामा गएर लडेको हुन्छ । भोलिपल्ट उसले सरकारको आलोचना गर्छ । यो तरिकाले त चल्दैन । समाजले पनि आफ्नो समाजको दिशा कता लान खोजेको हो स्वतन्त्रतातर्फ वा स्वच्छन्दतातर्फ ? स्वच्छन्दतातर्फ जाने हो भने कुनै न कुनै दिन हाम्रो समाज दुर्घटनामा पर्छ, भीडहरुद्वारा निर्दे्शित र नियन्त्रित हुन्छ । भीड भनेका खहरेजस्ता हुन्, त्यो क्षणिक हुन्छ । त्यसको दर्शन हुँदैन, विचार हुँदैन । अनुशासन हुँदैन, मर्यादा हुँदैन, लगाव हुँदैन र गन्तव्य पनि हुँदैन । त्यो जम्माजम्मी आवेग र आक्रोश मात्रै हुन्छ । हाम्रो समाजलाई निर्दे्शित र ‘गाइडेड’ गराउने गरी कुनै पनि प्रकारको नाममा देखापरेका छन् ‘सोसल साइट’ । ‘मिडिया’ र ‘सोसल साइट’ फरक कुरा हुन् ।
यसमा त म दावाका साथ भन्छु सरकारको काम तथा असन्तुष्टिलाई भन्दा पनि प्रणालीलाई खत्तम बनाउन खोज्ने भीड पनि छ । कसैले उरालेको भीड पनि छ । केही दिनअघिको प्रदर्शनमा तस्वीर कसका थिए ? ढाडमा बोकेको तस्वीर कसका थिए ? नारा के लागेको थियो ? अनि कानूनले पत्रकारिता र अपराधलाई एउटै भन्छ ? पत्रकारको एउटा कार्ड बोकेर हिँड्दैमा तरबार बोकी मान्छे काट्दै हिँड्न पाइन्छ ? मार्दै हिँड्न पाइन्छ ? जे पायो त्यही गरेर हिँड्न पाइन्छ ? त्यो त अपराधीकरण हुन्छ । त्यसैले समाजमा अपराधीकरणलाई कुनै ठाउँ छैन । यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ । यस्ता केही अपवादका घटना हुँदा र छानबिन गर्दा, कसैलाई छानबिन नै गर्न पाइँदैन भन्ने हो भने ‘मत्स्य न्याय’को समाज स्थापना गर्न लागेको हो कि एक्काइसौँ शताब्दीको गणतन्त्र नेपालको ? राज्य संविधानको सर्वोच्चता र कानूनी विधिद्वारा निर्दे्शित र नियन्त्रित हुन्छ । परिचालित हुन्छ । कुन समाज बनाउन खोजेको हामीले ? त्यस हिसाबले यस्ता अराजकता मच्चाउन खोज्ने र अराजकतातर्फ लान खोज्ने वा जान खोज्ने काम क्षणिक अभ्यास हो । जसले चाह्यो, यो उनीहरुलाई पनि थाहा हुनुपर्छ । यो गणतन्त्र कसैले लादेर ल्याइदिएको होइन । यो गणतन्त्र जनताले रगत बगाएर ल्याएको हो । एक दिनको हो ? एक जना मान्छे मरेर आएको हो ? लहडमा आएको हो ? सन्तानब्बे सालको शहीद पर्वदेखि आजसम्म कति मान्छे मरेर आएका छन् ? निरङ्कुश, जहानीयाँ व्यवस्था, वंशको व्यवस्था जनताद्वारा निर्वा्चित थिएन, जनतालाई मन परेको थिएन । समाजको नेतृत्व गर्दैनथ्यो । त्यस्तालाई हटाउन त जनताले कत्रो बलिदान दिनुप¥यो । चार जना उफ्रेर जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई चुनौती दिन खोज्नु चाहिँ बेकारको कुरा हो । यसमा कोको रमाउन रमाउन । रमाउन पाइन्छ । आँखामा पट्टि बाँधेर संसार अँध्यारो छ भन्न पाइन्छ ? कानूनहरु आउँछन्, आउँछन् । आमसञ्चारसँग सम्बन्धित कानून पनि आउँछ । कानून त आउँछ । सामाजिक सञ्जाल, मिडिया काउन्सिल पनि छ । आमसञ्चार पनि आउँछ । ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ । विज्ञापन कानून आइसकेको छ । सूचना प्रविधि पनि आउँछ । हुलाक पनि आउँछ ।